Maksikaanka oo u midoobay mudaaharaad ay ku diidanyihiin siyaasadda socdaalka ee Trump | Baydhabo Online
Maksikaanka oo u midoobay mudaaharaad ay ku diidanyihiin siyaasadda socdaalka ee Trump
Maria Amparo Cassar oo ka mid ah dadkii mudaaharaadayay ayaa sheegatay in siyaasadaha socdaalka ee Trump “ay halis ku yihiin bulshada adduunka”
Waxay intaas ku dartay “in aysan ahayn in la ilboobo in bulshada Maraykanku ay ka samaysantay soo galooti ayna ka sii samaysnaan doonaan soo galooti”. Mudaaaharaadayaasha isugu soo baxay magaalada caasimadda ah ee Mexico City, ayaa watay boorar midnimo tilmaamaya, mid ka mid ah boorarkaasna waxaa ku qornaa “Trump wuu ku mahadsanyahay midaynta Maksiko!”
Wuxuu sheegay in “Maksiko aysan rumaysnayn in darbiyo la dhiso.
Trump ayaa haddaba amray “in darbi aan laga talaabikarin laga dhiso” xadka uu Maraykanku la leeyahay
Maksiko, wuxuuna ku adkaystay in Maksikaanku ay bixiyaan kharashka ku baxaya.
Wuxuu ku celceliyay in darbigaasi uu muhiim u yahay sidii loo joojin lahaa “qulqulka aan la malayn karin” ee dhamaan dadka ka imaanaya bartamaha qaaradda Ameerika.
In uu darbi 2000 oo mayl ah ka dhiso xadka Maksiko ayaa ka mid ahaa waxyaabihii kawga ka haa balanqaadyadii ol’olaha doorashada ee Trump. Hawlgallada lagu beegsanayo dadka soo galootiga ah ee Maraykanka ku sugan ayaa walwal ku beertay dadka Maksikaanka ah ee Maraykanka ku nool, ku waas oo laga yaabo in la soo masaafuriyo iyadoo loo cuskanayo tallaabooyinka cusub ee madaxweynaha.